इन्जिन भने - कार को हृदय, यस कार्बोरेटर आफ्नो हृदय वाल्व छ। र दायाँ कसरी उहाँले कन्फिगर गरिनेछ धेरै प्रदर्शन कार भर पर्छन्। यो इन्धन खपत र शक्ति, र विसर्जन को गतिशीलता र उत्सर्जन को पनि स्तर। समय समयमा हामी यो वस्तु समायोजन छ। र आज हामी आफ्नै हात संग VAZ 2109 मा कार्बोरेटर समायोजन कसरी हेर्न हुनेछ।
घरेलू "Solex" - को वोल्गा ओटोमोबाइल प्लान्ट फरक विशेषताहरु संग धेरै संस्करण "nines" जारी गरेको छ भन्ने तथ्यलाई बाबजुद कार्बोरेटर तिनीहरूले एक ब्रान्ड थियो। यो सर्किट विवरण के हो? 2109 दशक एक कार्बोरेटर Solex संग सुसज्जित थियो, र यसको डिजाइन पनि वर्ष परिवर्तन छैन। तपाईं 2nd फोटो मा हेर्न सक्नुहुन्छ रेखाचित्र।
को प्रिपेरेटरी चरण
तपाईं VAZ 2109 मा कार्बोरेटर समायोजन अघि, राम्ररी सफा गर्नुपर्छ। तर आवश्यक के (यो विभिन्न sediments समावेश गर्दैन कि proviso संग हुनत)। यो खियाले वा soot छ भने, तत्व एक शक्तिशाली उपकरण धुन आवश्यक छ। अन्यथा, तपाईं कसरी कार्बोरेटर समायोजन छैन सच्याउन प्रयास थियो, यो को परिणाम न्यूनतम हुनेछ।
म सफा गर्न के गर्नुपर्छ?
यस कार्यका समयमा हामी उपकरण र सामाग्री को निम्न सेट आवश्यक:
मालिकको मार्गदर्शन 2109 (खैर, "Solex" कार्बोरेटर रेखाचित्र सही देखाइएको)।
चिल्लो कपडा पन्जा।
धेरै पातलो लाठी (साधारण दांत कोट्याउने सिन्का धमकना)। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं टूथब्रश लाग्न सक्छ। यसलाई हामी कार्बोरेटर VAZ सफा।
रबर पन्जा को एक जोडी (यसलाई अझ राम्रो एक शक्तिशाली विलायक गर्न, एकैचोटि दुई जोडी लगाउन छाला सतह मिल्यो छ छैन)।
Wrenches र पेचकस को सेट गर्नुहोस्।
को सक्छन् संकुचित हावा। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं एक साधारण स्प्रे-जस्तो ईेशनर लाग्न सक्छ।
यसबाहेक, तपाईं चश्मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कुनै पनि छ भने, कार्बोरेटर बीच अधिकतम दूरी राख्न र बिस्तारै सतह क्लीनर मा लागू हुन्छ।
जो उपकरण चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ?
क्षण, तपाईं carburetors सफाई को लागि पदार्थ को एक विस्तृत विविधता खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले कम्पनीहरु दर्जनौँ गरेको छन्। चयन नियम सरल छन्। पसलमा विक्रेता एक विशेष तरल पदार्थ, कार्बोरेटर (सफाई को लागि) को लागि विशेष डिजाइन अनुरोध गर्नुपर्छ। सम्झना, यस एजेन्ट WD-40 यो लागि उपयुक्त किनभने तेल को उच्च सामग्रीको छ! अक्सर, विशेष क्लीनर डिब्बे मा बेचिन्छ - हो र पसलहरुमा किनेको गर्नुपर्छ।
तपाईं कार्बोरेटर सफाई मा लगे छैन भने, यो पर्याप्त छैन सतह सफा। बोसो को एक ठूलो सामग्री यसलाई भागहरु मा पूर्ण खोल्ने गर्न आवश्यक छ, र प्रत्येक भाग अलग प्रक्रिया स्प्रे।
सानो विवरण मा
को पानीका मुहानहरू र साना cogs गर्न disassembly विशेष ध्यान समयमा। तिनीहरूलाई छुट्टै बक्स वा संख्यात्मक राख्न प्रयास, त्यसैले त त्यहाँ कार्बोरेटर को अन्त मा विधानसभा समयमा कुनै समस्या थिए। यो वस्तु विश्लेषण एक कन्टेनर देखि सानो पनि हरेक विवरण प्रशोधन हुनुपर्छ। यस मामला मा, सबै रबर भागहरु को कार्बोरेटर हटाइएको हुनुपर्छ। विलायक संग सम्पर्क पछि जो तिनीहरूलाई कडा विकृत गर्न सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूले सील गुण गुमाउनु हुनेछ। यो पनि प्लास्टिक भागहरु मा क्लीनर लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। तिनीहरूले यो तरल पदार्थ देखि छुट्टयाएर गर्नुपर्छ।
तपाईं तंत्र सबै हालतमा प्रक्रिया गरेपछि, तपाईं खियाले र तलछट बारे 10-15 मिनेट आंशिक भंग प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। थप घटक चलिरहेको पानी अन्तर्गत धोए छन्। आवश्यक छ भने, तपाईं एक दांत कोट्याउने सिन्का वा टूथब्रश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
एक ब्रश वा लाठी उपयोग, वाल्व र कार्बोरेटर मा प्वालहरू poking प्रयास छैन। तिनीहरूलाई माध्यम हावा र इन्धन सम्झना गर्छन, त्यसैले धेरै माटो त्यहाँ मिल्यो छ मोटर सञ्चालन exacerbate र हुन सक्छ वृद्धि इन्धन खपत। यस्तै प्वालहरू संकुचित हावा वा aerosol संग साफ छन्। बाटो गरेर, प्रयोग क्लीनर को रहलपहल फेरि प्रयोग गर्न सकिँदैन - यो पदार्थ धेरै लामो आफ्नो जीवन छ, र लगभग समय यसको गुण गुमाउन छैन। अर्को कार्बोरेटर राम्ररी तिनीहरूलाई भोकमरी र त्यसपछि हाम्रो मर्मतका को दोस्रो भागमा अगाडि बढ्न - समायोजन।
आफ्नै हात संग VAZ 2109 मा कार्बोरेटर कसरी समायोजन गर्ने?
पहिलो कुरा तपाईं इन्धन स्तर नियन्त्रण जो फ्लोट कोठामा, के गर्न आवश्यक छ।
को कार्बोरेटर र वाल्व को आउटलेट मा छनोट गर्न प्रयास नगर्नुहोस्। यी प्वालहरू इन्जिन को चिल्लो कार्यका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन् जो, इन्धन र हावा आपूर्ति गर्दै छन्। यस्तो खाडल aerosol वा संकुचित हावा खाली हुन्छ। तरल क्लीनर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। केही thrifty मोटर चालकहरुलाई को क्लीनर धेरै पटक प्रयोग गर्नुहोस्।
को कार्बोरेटर सफाई पछि, यो राम्ररी सुक्खामा, र तपाईं समायोजन गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रक्रिया धेरै लामो र जटिल छ, तर यो धेरै वास्तविक सामना गर्न छ। सुरुमा, इन्जिन सुरु र उसलाई केही मिनेट लागि चलाउन मौका दिनुहोस्। अर्को, यसलाई अक्षम र हावा फिल्टर फुकाल्नु। कि पछि, इन्धन नली हटाउन। केही स्क्रू ध्यान लिन र कार्बोरेटर आवरण बाहिर बाहिर। एक गलत कदम भएको नाउहरु बिगार्न जब सक्छ, कि त यथासक्य सावधानीपूर्वक सबै के सम्झना। त्यसपछि हामी एक हात caliper लिन र आवास किनारा गर्न इन्धन स्तर को अवकास मापन।
आदर्श मान 25.5 मिमि (1-2 मिलिमिटरमा मा चलाउन) हुनुपर्छ। यो खाली सही छैन भने, तपाईँले फ्लोट हात को ट्याब मोड गर्न आवश्यक छ। ठूलो सटीक लागि, हामी यो प्रक्रिया धेरै पटक प्रदर्शन। हामी कवर उल्टाउन गर्न देखि, तपाईं फ्लोट को संभोग सतह को किनाराको समानान्तर मा disposed भनेर पक्का गर्न आवश्यक छ।
तर सबै छ। कसरी 2109 मा कार्बोरेटर समायोजन गर्न? यो काम पछि, हामी ट्रिगर कन्फिगर गर्न मा सार्न। पहिले तपाईं आफ्नो डायफ्राम थप प्रयोगको लागि उपयुक्त छ भनेर पक्का गर्न आवश्यक छ। यो धेरै सजिलो छ -4स्क्रू वोल्ट नट आदि खोल्नु र इन्जिन आवरण हटाउन। यो बाङ्गो वा टूट छ भने, यो एउटा नयाँ बदलिएको हुनुपर्छ। त्यसपछि ट्रिगर उपकरण समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्नु। यो बन्द स्थिति सारियो छ भनेर सबै को पहिलो दमा लीवर बारी। अर्को गुप्तवास पेचकस सापट।
त्यसपछि, हामी कोठामा पर्खाल र सटर बीच गठन अंतर नाप्ने गरिन्छ। यो दस्तावेज "Solex" निर्दिष्ट एक विरुद्ध जाँच गर्न आवश्यक छ। अंतर परिवर्तन गर्न, तपाईं, लक नट र पेचकस loosen को समायोजन स्क्रू घडीको दिशामा सक्रिय वा घडीको गर्न आवश्यक छ। अर्को खाली नाप्ने छन् भल्ब, को 1st कोठामा छ। प्राप्त डाटा नै भन्ने प्राविधिक दस्तावेज हो नियमहरु संग धेरै सकेसम्म हुनुपर्छ। यो खाली सही छैन भने, भल्ब स्क्रू घुमाउँदा गरेर समायोजन गर्नुहोस्।
को बीसौँ समायोजन
सबै, अब यसलाई सानो लागि रहन्छ। को समायोजन - हामी अन्तिम चरण लिन छ निस्क्रियगर्दै। यस कार्यका सुरु फेरि काम तापमान गर्न गरम हुनुपर्छ अघि इन्जिन VAZ 2109. कार्बोरेटर यसरी आफ्नो नाममात्र स्थानमा सेट गर्नुपर्छ। तसर्थ, इन्जिन बन्द र गुणस्तर स्क्रू मिश्रण को राज्य मा हेर्न। यो र्याप र त्यसपछि4पालैपालो सम्म loosen गर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि, इन्जिन सुरु भएको दमा हटाउन र, उच्च बीम सक्रिय एक प्रशंसक साथ। एउटै समयमा स्क्रू इन्धन-हावा मिश्रण को समायोज्य मात्रा छ।
यो एक यस्तो स्थिति मा राख्न हुनुपर्छ इन्जिन गति निष्क्रिय मा 800 भन्दा कुनै थप र कम कि 750 मिनेट RPM गरिएको छ। को स्क्रू गुणस्तर पछि अधिकतम गति पुग्छ।
पछि के गर्ने?
अर्को, फेरि 900 आर / मिनेट गर्न स्क्रू क्रांतियों नम्बर परिवर्तन। गुणस्तर स्क्रू 800 Rev / मिनेट मा प्रदर्शन। त्यसपछि अन्तिम तत्व अस्थिरता सम्म शीर्षक। फेरि हामी यसलाई वोल्ट नट आदि खोल्नु साढे पालो। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूप मा, कार्बोरेटर (2109 "समारा") को प्रतिस्थापन आवश्यक छैन। तर तपाईं हामी यस लेखमा प्रदान गरेको गुणस्तर र इन्धन को मात्रा को स्क्रू मा आवश्यक मूल्य द्वारा काम पुरा अनुक्रम जान्नु आवश्यक छ।
यो चरण मा प्रश्न "कसरी 2109 मा कार्बोरेटर समायोजन गर्न" सबै बन्द गर्न सकिँदैन।
अन्तमा, हामी सही जोखिम निस्क्रियगर्दै गति इन्जिन मात्र भने एक स्थिर सञ्चालन सम्भव छ भनेर याद गर्नुहोस्। अन्यथा, सबै काम बेकारी हुनेछ।
बच्चा को Natal विकास: को अवधि र चरणमा फोटो संग। बच्चाको मासिक को Natal विकास
कति चाँडो टोलीमा सामेल
नाम Garri Pottera के हो? Deniel Redkliff